Sangana neKushanya Magamba paWorld Travel Market London nhasi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Sangana neKushanya Magamba paWorld Travel Market London nhasi
Nhau Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • UK Kuputsa Nhau • Wtn
eTurboNews muparidzi Juergen Steinmetz, anove zvakare Sachigaro weWorld Tourism Network, uye nhengo yeDare Repamusoro reAfrican Tourism Board vakasvika muLondon nemusi weSvondo, vakagadzirira kupupurira nekutora chikamu mukutangwa patsva kwekuratidzira kwekutengeserana kweindasitiri yezvekushanya kwechipiri pasi rose - iyo World Travel Market London Mbudzi 1-3.
Nhasi, World Travel Market muLondon ichavhura mikova yayo na10.00 am paExcel Exhibition Center muLondon.
Vatungamiriri vekushanya neKushanya kubva pasirese vepasi vari zvakare muLondon kuzosangana, kukwazisa, uye kukurukura.
World Tourism Network ichagamuchira Tourism Heroes nhasi, neMuvhuro na4.00pm paKenya Tourism Board Stand AF 150.
Kwete chete iyo World Kufamba Musika mukana wekugadzira, kugadzira uye kutengesa zvigadzirwa zvitsva zvekufamba muzera reCCIDID-19, asi zvakare mukana kune avo vanofamba uye vanozunguza indasitiri kuti vabatane zvakare mumunhu. Kubatana uku kunofanirwa kuve nezwi rakasimba kutungamira rwendo kudzokera munzira.
"Kuvhiringidzika kunofanirwa kupera kubva pakufamba zvakare.", akadaro Juergen Steinmetz. “World Tourism Network yakagadzirira kuve chikamu chenhaurirano yakakura. Hapachina bhizinesi semazuva ese, uye kushanda pamwe chete nevese vane chekuita ndiyo kiyi yekubudirira. "
Tourism Magamba kuzivikanwa ne World Tourism Network vanokokwa kuKenya Stand (AF150) nhasi na4.00 pm. (Mbudzi 1) Sangano rinozoziva magamba maviri matsva kubva kuIsrael neBarbados- uye vashanyi vazhinji vanoshamisika vanotarisirwa kuve chikamu chemusangano wekutanga weNON ZOOM wenhengo dzeWTN nevateereri veWTM.
Iyo World Tourism Network yakaumbwa seyo Kuvakazve Kufamba Hurukuro yakatanga nechinyorwa ichi, PATA, African Tourism Board, uye Nepal Tourism Board muna Kurume 2020 padivi peITB Berlin yakamiswa.
Inopfuura mazana maviri emisangano ye zoom yakaumba mubatanidzwa mukufamba uye kushanya kwenyika kubva kunyika zana nemakumi maviri nesere. Chinangwa cheWTN ndechekuwedzerawo izwi kune vatambi vadiki nevepakati muindasitiri yekufamba uye yekushanya yepasirese.
Gamba rekutanga rekushanya, Hon. Najib Balala, Secretary of Tourism weKenya achange achitambira. Vanotarisirwawo kuuya ndiVaMh. Edmund Bartlett anobva kuJamaica, uye Dr. Taleb Rifai, aimbova Munyori Mukuru-General UNWTO - vose vari pakati pemagamba ekutanga ekushanyirwa anozivikanwa nesangano iri.
Barbados ichasuma gamba rayo idzva rekushanya uye inotarisirwa kupinda negurukota, CEO weTourism Board, uye National TV crew.
Christian Rosario, eTurboNews wepakutanga mubairo-anohwina mutori wemifananidzo achatora mamwe mafoto anoshamisa kugovera.
NeChitatu 11.30 am, Dr. Peter Tarlow, mutungamiri weWTN achange achitaura pagungano Cyber ​​Security chikamu paTravel Forward paWorld Travel Market.
Zvisinei nekusangana nekutyorwa kukuru kwedata mumakore achangopfuura, indasitiri yekufambisa ichiri yakazara nemakomba ekuchengetedza. Makuru endege nemacheni emahotera ari kunetsekana kuchengetedza mapuratifomu avo epamhepo kunyangwe mushure mekutyorwa kwedata kwekare uye cyberattacks yafumura ruzivo rwemamiriyoni evatengi uye kubhadharisa faindi kubva kune vanodzora zvakavanzika. Zvino kupfuura nakare kose, zvakakosha kuti indasitiri yekufambisa ienderane nekuchinja nguva uye matanho anodiwa kudzivirira kutyisidzira kwakadaro. Munguva yechikamu chino, boka renyanzvi richagovana nzwisiso mumatanho anofanirwa kutora indasitiri kudzivirira kubva kunjodzi dzecyber uye kutyisidzira kuitira kuchengetedza data revatengi vavo.
Musika weWorld Travel uchaita iyo UNWTO Ministerial Summit senguva dzose neWTTC. Saudi Arabia gore rino inotarisirwa kuve nebasa rakatanhamara.
Sangana neni paWTM
Juergen Steinmetz akagadzirira kusangana eTurboNews vaverengi pachavo paWorld Travel Market. Ndokumbira ubate paWhatsApp: + 1-808-953-4705 kana email [email inodzivirirwa]